Taariikhda - Runchen Industry Co., Ltd.
Runjin waxaa Unilever u ansixiyay inuu yahay shirkad caalami ah. Ganacsigeennu wuxuu gaadhay suuqyadooda Indonesia, Philippine, Australia, South Africa market. Waxaanan sii wadnaa isbeddellada sii kordhaya ee fursadaha ganacsiga. Tani waa guul muhiim u ah oggolaanshaha macaamiisha suuqa.
Runchen waxay xafiis rasmiya ka samaysatay magaalada Taizhou oo cinwaankeedu yahay Taizhou Runjin Makiinado Co., Ltd. Runjin Makiinado Co., Ltd waxay leedahay warshad 4000m2 ah, 60 shaqaale ah oo ay kujiraan 15 farsamo yaqaano aad u xirfad iyo khibrad badan mashiinka.
Runchen waxay cilmi baaris ku sameysay oo soo saartay qalab jalaato wax ku ool ah oo kaladuwan, kaas oo ay aqoonsadeen macaamiil badan isla markaana caan ka noqdeen aduunka oo dhan.
Waxaan ku horumarinay macaamiisha Chile, Australia, Dubai, Mexico, suuqa Koonfur-bari Aasiya. Si loo buuxiyo shuruudaha adag ee warshadaha cuntada, waxaan dejinay heer caalami ah oo sare oo ku saabsan qalabkeena. Dhammaan qeybahayada korantada iyo qeybaha ugu waaweyn waxaa lagu dhejiyay astaan ​​caan ah, sida Siemens, Bonfiglioli, Schneider, iwm.
Ka dib sanado badan oo waayo aragnimo suuqa gudaha ah iyo xiriir isku kalsoonaan badan la dhisay, Renchen wuxuu bilaabay inuu ku fidiyo ganacsi adduunka oo dhan.
Soo bandhigida soosaarka cusub ee 'Ice cream formula' wuxuu jebiyaa nooca dhaqanka wuxuuna gaaraa guul wanaagsan 2002.
Runchen waxaa la aasaasay 2001.
Erayada ereyada A, Erayo-fure ah B,